Cajaa’ibka Dunida: Nin Muddo 13 Sanadood Ah Qabri Kula Nool Lafaha Maydka Nin Ay Saaxiibo Ahaan Jireen - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Cajaa’ibka Dunida: Nin Muddo 13 Sanadood Ah Qabri Kula Nool Lafaha Maydka...
Inkasta oo uu yahay Gaal aan Aakhiro iyo Nabi Muxamed Toona rumaysnayn hadana waa kan Adduunyada inta uu isaga saahiday jeclaystay in uu kalidii khulwo ku noolaado. Ka daranta, door biday in uu naf qaybsi la yeesho oo ag jiifsado Lafo iyo qalfoof beri hore hurushoobay oo ka hadhay maydka nin ay saaxiibo ahaan jireen. Waa qiso aad loola yaabay oo laga soo warinayo wadanka Brazil ee ku yaalla qaaradda Latin Amerika. Wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxa carriga Iniriiska oo arrinka ninkan wax ka qoray waxa uu ku bilaabayaa sidan: “Fabio Beraldo oo loo yaqaano Fabilinho waxa uu jiraa 47 sanadood, wakhtigan waa nin sabool ah oo aan hal dollar haysan, ahna nin dibad gal ah oo aan hoy uu seexdo lahayn (Homeless). Inkasta oo uu sidan yahay hadana waxa la wariyey in uu ahaan jiray nin maal-qabeen ah balse muddo hore kacay oo aan maanta mood iyo nool toona u dareerin. Ninkan odayga ah waxa hoy u ah oo uu seexdaa meel qabri ah oo ay lafo aadame ku aasan yihiin. Waxa uu is ag dhigay oo uu habeenkii iyo maalintiiba garab jiifaa lafo bani aadam oo ka soo hadhay maydka nin ay saaxiibo ahaan jireen, lafahaasaana u ah wehel iyo walaal uu adduunka ka eegto. Tan iyo maalintii uu lacag beelay ee uu sacabada dhulka saaray waxa uu noqday nin daroogadu dishootay oo aan wax nolol ah haysan”.
Wargeyska Daily Mirror ee arrinka ninkan wax ka qoray oo ay idiin soo turjuntay shabakadda tusmoonline.com waxa uu ka sheekeeyey sida ay u dhacday in uu lafaha saaxiibkii wehel ahaan u haysto muddo ku siman 13 sanadood. Wargeyska oo arrintaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Fabio Beraldo waxa muddo sannad kadib ah markii uu lacag beelay uu maalin maalmaha ka mid ah isaga oo daroogaysan toos u abbaaray nin ay asaxaab jireen oo geeriyooday qabrigiisii lagu aasay. Inta uu qabrigii faqay ayuu lafihii saaxiibkii isku habeeyey oo isku ururiyey kadibna sidaa hoy kaga dhigtay godkii qabriga ahaa isaga oo lafahaasi garab seexda wehelna ka dhigta”. Fabio oo wax laga waydiiyey in uu jecel yahay in uu mar kale noloshii caadiga ahayd ku soo noqdo oo uu qabrigan isaga soo baxo ayaa yidhi: “Ma doonayo adduunyadan xumaanta badan. Waxa aan wax walba ka jecelahay in aan kali ku noolaado. Marka aan cunto yar dadka soo baryo waxa aan dib ugu soo noqdaa qabrigii aan samaystay ee lafaha saaxiibkay wehelka iigu ahaa intaasaan adduunka ka eeganayaa mana doonayo in aan dadka u soo dhawaado. Haddii ay dawladdu hoy iyo nolol i siiso waxaan u noolaan lahaa sida dadka caadiga ah”. Qisada ninkan ayaa ka dhacday deegaan ka ag dhaw magaalada San Jose ee badhtamaha Brazil.